NdFeB futhi SmCo Magnets Isetshenziswa Magnetic Pump
Strong NdFeB futhi SmCo odonsa zingakhiqiza amandla ukushayela ezinye izinto ngaphandle kokuxhumana ngqo, izicelo eziningi kangaka ukusizakala lesi sici, ngokuvamile efana couplings kazibuthe bese amaphampu ahambisana kazibuthe for izicelo seal-ngaphansi. Magnetic drive Couplings unikele tr-non-contact ...
I-5G Circulator ne-Isolator SmCo Magnet
I-5G, ubuchwepheshe bezokuxhumana beselula besizukulwane sesihlanu isizukulwane esisha sobuchwepheshe bezokuxhumana nge-broadband obunezici zesivinini esikhulu, ukubambezeleka okuphansi nokuxhuma okukhulu. Ingqalasizinda yenethiwekhi ukubona ukuxhumana komuntu nomshini wento. I-inthanethi o ...
Isimo se-China Neodymium Magnet kanye neProspect
Umkhakha wezinto zikazibuthe waphakade waseChina udlala indima ebalulekile emhlabeni. Awekho kuphela amabhizinisi amaningi abandakanyeka ekukhiqizeni nasekusebenziseni, kepha futhi nomsebenzi wokucwaninga ubukade ukhona. Permanent uzibuthe izinto ikakhulukazi zihlukaniswe ezingavamile umhlaba uzibuthe, metal unomphela ...
Uzibuthe Wazama Ukusetshenziswa E-China Yasendulo
Impahla yokumuncwa yensimbi ye-magnetite itholakale isikhathi eside. Kumavolumu ayisishiyagalolunye we-Lu's spring and Autumn Annals, kunesisho esithi: "uma unomusa ngokwanele ukuheha i-iron, ungaholela kuwo." Ngaleso sikhathi, abantu babiza "uzibuthe" ngokuthi "umusa". UTh ...
Uzibuthe Watholakala Nini Futhi Kuphi
Uzibuthe awusungulwanga ngumuntu, kepha wenziwe ngezinto zemvelo kazibuthe. AmaGreki asendulo namaShayina athola itshe lemvelo elinamandla phakathi kwemvelo Libizwa ngokuthi "uzibuthe". Lolu hlobo lwetshe lungakwazi ukumunca izingcezu zensimbi ngomlingo futhi njalo likhombe ohlangothini olufanayo ngemuva kwe-swi ...